कता जाँदैछ समाज ? गोठालो गएकी १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत, ८७ वर्षका वृद्ध पक्राउ « Lokpath
२०७७, १७ फाल्गुन सोमवार १७:४३
कता जाँदैछ समाज ? गोठालो गएकी १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत, ८७ वर्षका वृद्ध पक्राउ
प्रकाशित मिति : २०७७, १७ फाल्गुन सोमवार १७:४३
काठमाडौं । गोरखामा १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छिन् । बलात्कार आरोपमा गण्डकी गाउँपालिका वडा नं ४ गैरीगाउँका ८७ वर्षका एक वृद्धलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
गोठालो गएकी बालिकालाई ८७ वर्षका केदारप्रसाद देवकोटाले बलात्कार गरेपछि पीडितको परिवारले प्रहरी समक्ष जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र बाहादुर गुरुङले लोकपथलाई जानकारी दिए ।
‘गोठालो गएकी बालीकालाई पटक – पटक बलात्कार गरेको पीडितकको परिवारले हामीलाई बताउनुभयो । हामीले तुरुन्तै आरोपितलाई पक्राउ गरेका छौं ।’ एसपी गुरुङले भने ।
‘अदालतबाट म्याद थप गरि थप अनुसन्धान गर्दै छौँ ।’ उनले भने ।
बलात्कृत भएपछि सजिलोसँग बाँच्न दिँदैन नेपाली समाजले !
नेपालमा नाबालिकादेखि ७०/८० वर्षीया वृद्धा हजुरआमा समेत बलात्कार अनि यौनजन्य हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्नेहरुमा अधिकांश आफन्त, नातेदार, छिमेकी तथा अन्य चिनेजानेकैबाट हुने गरेको पाइन्छ । यौनजन्य दुव्र्यहारको प्रमुख निशानामा अधिकांश नाबालिका, बालिका र किशोरीहरु नै पर्ने गरेका छन् ।
फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क आदि जस्ता विश्वका कति मुलुकहरु महिलामैत्री छन् भने कति मुलुक महिलाका लागि क्रुर मानिन्छन् । सुडान, लिविया, क्यूवा जस्ता मुलुकमा त महिलालाई मान्छेको दर्जासमेत नदिई व्यवहार गरिन्छ ।